I-Poonthanam Homestay-i-villa epheleleyo
Cheriyoor, Kerala, India
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguPratish
IPoonthanam esecaleni komlambo ivilla inesitayile seKerala kwaye ikwilali yaseCheriyoor. Inamagumbi amabini amabini kunye negumbi elijongene nomlambo. Yindawo ezolileyo nekhululekileyo, kude nesiphithiphithi sesixeko. I-villa ijikelezwe buhlaza kwaye iindwendwe zikwazi ukufikelela kuphela emlanjeni. Kukho umgcini kunye nompheki okhoyo kwaye ukutya kunokuphekwa ngokwemfuno. I-villa epheleleyo iya kufumaneka kuphela kuwe
Kukho isikhephe esincinci sabucala esifumanekayo. Ungabhukisha kwangethuba ukuze ukhwele isikhephe. Yiba nesidlo ngasemlanjeni okanye egadini. Ukuba ufuna nje ukuphumla kunye nencwadi ngombono womlambo, unokuhlala kwindawo yokuhlala ngaphandle kwegumbi le-suite okanye sinokubeka isithuba ngasemlanjeni.
Ibhedi enkulu eyi-1, Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-3
Umlambo ngumtsalane omkhulu kwiindwendwe zethu. Unokuhlala ngasemlanjeni, uphunga iti/ikofu okanye ufunde incwadi. Ngelixa sibonelela ngokutya ngokwemfuno, kukho iindawo zokutyela ezahlukeneyo eziya kuzisa iiodolo zakho ekhaya.
Amabhishi, amanzi angasemva, izikhululo zeenduli zingaphakathi kwendawo emalunga neekhilomitha ezili-100 ukusuka kwi-villa.
Umbuki zindwendwe ngu- Pratish
Xa ubhaliso luqinisekisiwe, siya kufumaneka kuwe. Ukuba kuyafuneka, siya kufumaneka ukuze sikuse kwindawo ngentlawulo eqhelekileyo. Kukho iilwandle, amanzi angasemva, iitempile njl njl kwaye ukuba ufuna ukujikeleza kwaye ufuna isithuthi, nceda usazise kwangaphambili
Xa ubhaliso luqinisekisiwe, siya kufumaneka kuwe. Ukuba kuyafuneka, siya kufumaneka ukuze sikuse kwindawo ngentlawulo eqhelekileyo. Kukho iilwandle, amanzi angasemva, iitempile njl…